Macdanta King Sulaymaan (qaybta 14), Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waan ka caawin kari waayey ka fikirka Basil markaan akhriyay Maahmaahyada 19,3. Dadku waxay ku halligmaan noloshooda doqonnimadooda. Marka muxuu Ilaahay had iyo jeer ugu eedeeyaa arintan oo barkimad u ah? Basil? Ayaa basil Basil Fawlty waa astaamaha ugu weyn ee majaajillada aad u guuleysta ee Ingiriiska ee Fawlty Towers waxaana ciyaaray John Cleese. Basil waa nin cuqdad leh, edeb leh, oo aan naxariis lahayn oo maamula hoteel ku yaal magaalada xeebta ku taal ee Todquay ee England. Isaga xanaaqiisa ayuu u dul saaraa dadka kale intuu ku eedeeyo nacasnimadiisa u gaarka ah. Dhibbanaha ayaa badanaa sugi jiray Isbaanishka Manuel. Waan ka xumahay taas. Wuxuu ka yimid Barcelona. Basil wuxuu ku eedeeyey wax walba iyo qof walba. Hal goob, Basil gabi ahaanba wuu lumay dareemaashiisa. Way gubataa oo Basil wuxuu isku dayaa inuu helo furaha gacantiisa ku kiciya alaarmiga dabka, laakiin isagu si qaldan ayuu u furay. Halkii uu ku eedayn lahaa dadka ama alaabtiisa (sida baabuurkiisa) xaaladdiisa sidii caadiga ahayd, wuxuu gacanta ku qabtaa feedhkiisa cirka ilaa uu si kadis ah u qaylinayo mahadsanid Ilaah! Aad baad u mahadsantahay! Ma waxaad tahay sida Basil? Miyaad marwalba dembiile ka noqotaa dadka kale iyo xitaa haddii haddii wax xun kugu dhacaan?
Haddii aad ku dhacdo imtixaanka, waxaad dhahdaa runti waan maray, laakiin macallinkeygu aniga ima jecla.
Haddii aad dulqaadasho weydo, miyay sababtu tahay xanaaqaaga?
Haddii kooxdaada ay lumiso, ma waxaa ugu wacan garsooraha inuu eexsanaa?
Haddii aad qabtid dhibaatooyin cilmi nafsi ah, waalidiintaada, walaalahaaga, ayeeyadaa ayee had iyo jeer eedeeyaan?
Liiskan waad ku sii wadi kartaa sidaad rabto. Laakiin dhammaantood waxay leeyihiin shay isku wada mid ah: fikradda ah inaad had iyo jeer kaliya dhibane tahay. Ku eedaynta kuwa kale wax xun maahan dhibaatada Basil oo keliya - waxay sidoo kale si qotodheer ugu xidhan tahay dabiicaddeena waxayna qayb ka tahay geedka qoyskeenna. Markaan eedeynno kuwa kale, waxaan sameyneynaa sida saxda ah ee ay awowayaashayadu sameeyeen. Markii ay caasiyeen Ilaah, Aadan wuu eedeeyey Xaawa iyo Ilaah, Xaawa wuu sii waday eedaynta abeesada (Bilowgii 1: 3-12).
Laakiin muxuu uga falceliyay sidaas oo kale? Jawaabtu waxay naga caawineysaa inaan fahamno waxa inaga dhigay kii aan maanta nahay. Muuqaalkan ayaa wali dhacaya maanta. Bal ka fikir meesha: Shaydaanku wuxuu u yimid Aadan iyo Xaawo oo wuxuu ku tijaabiyey inay cunaan geedka. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu ku carqaladeeyo qorshaha Ilaahay ee iyaga iyo dadka ka dambeeya. Qaabka Shaydaanka? Been buu u sheegay. Waxaad noqon kartaa sida Ilaah oo kale. Maxaad sameyn lahayd hadaad Aadan iyo Xaawo oo aad ereyadan maqashay? Waad fiirisaa waxaadna arkeysaa in wax waliba ay qumman yihiin. Eebbe waa kaamil, isagu wuxuu abuuray adduunyo kaamil ah oo wuxuu gacanta ku hayaa adduunkan kaamilka ah iyo waxa ku jira oo dhan. Adduunkan kaamilka ah wuxuu ku habboon yahay ilaah qumman.
Ma ahan wax adag in la qiyaaso waxa Adam iyo Xaawa u maleeyeen:
Haddii aan u noqdo sida Ilaah, kaamil baan ahay. Waxaan noqon doonaa kan ugu fiican oo aan lahaan doonaa xakamayn buuxda noloshayda iyo waxkasta oo igu xeeran! Aadan iyo Xaawo waxay ku dhaceen loop Shaydaanka. Way ixtiraamaan amarradii Eebbe oo waxay ku cunaan midhihii laga mamnuucay bannaanka. Runta Eebbe ayay been ku beddelaan (Rooma 1,25:XNUMX). Argagaxdooda, waxay garteen inay iyagu yihiin wax aan ilaahay ahayn. Ka sii darani - waxay ka yar yihiin dhowr daqiiqo kahor. Xitaa haddii ay ku hareereysan yihiin jacaylka aan dhammaadka lahayn ee Eebbe, waxay luminayaan dhammaan dareenka ah in lagu jeclaado. Iyagu waa xishoodaan, xishoodaan, oo dembi bay galeen. Kaliya maahan inay caasiyeen Ilaah, laakiin waxay garteen inay iyagu kaamil ahayn oo ayan wax gacanta ku haynin - gabi ahaanba waa kuwo aan ku filnayn. Lammaanaha, oo aan ku noolaan jirin maqaarkooda oo maskaxdoodu ku madoobaatay mugdi, waxay u isticmaalaan caleemo berde sidii daboollo xaalad deg deg ah, waxay u isticmaalaan caleemo fig sidii dhar deg deg ah waxayna isku dayaan inay ceebtooda ka qarsadaan midba midka kale. Kuu sheegi maayo inaanan run ahaan khafiif ahayn - ma ogaan doontid waxaan runtii ahay maxaa yeelay waan ka xishoonayaa. Noloshoodu hadda waxay ku saleysan tahay mala awaalka ah in la jeclaan karo oo keliya haddii ay qumman yihiin.
Runtii ma la yaab baa hadii aan wali la halgano fikradaha sida "Waxba kama qalmo oo sikastaba muhiim uma ihi"? Markaa waan helnay. Aadan iyo Xaawa fahamkii qofkii Ilaah yahay iyo cidda ay ku jahwareereen. In kasta oo ay ka ogaadeen wax ku saabsan Ilaah, ma ayan dooneynin inay Ilaah caabudaan ama ugu mahad naqaan sidii Ilaahay. Hase yeeshe, waxay bilaabeen inay sameeyaan fikrado aan macno lahayn oo ku saabsan Ilaah, oo maskaxdooduna way madoobaatay oo jahwareerisay (Rooma 1,21:XNUMX). Sida qashinka sunta ah ee lagu tuuray wabi, beentaas iyo waxa ay keentay ayaa faafay isla markaana sumeeyay bini-aadamka. Caleenta berdaha weli waa la beero ilaa maantadan la joogo.
In lagu eedeeyo dadka kale waxna raadiso cudurdaar waa maaskaro weyn oo aan gashanno maxaa yeelay nafteenna iyo dadka kale uma qiran karno in aan kaamil nahay. Sidaa darteed waa been, waxaan buunbuunineynaa oo dambiileyaasha kale ayaan uga rabnaa dadka kale. Haddii wax qaldamaan shaqada ama guriga, khaladka ma lihi. Waxaan u xiraynaa waji-xidhaan si aan u qarinno dareenkeena ceeb iyo qiimo la’aan. Kaliya halkan fiiri! Waan fiicanahay Wax walbana noloshayda ayay ku shaqeeyaan. Laakiin daboolka masiixadan ayaa soo socota waxa soo socda: Haddii aad igu garaneen sida aan ahay runtii mar dambe aniga ima jecli doontid. Laakiin haddii aan kuu cadeeyo in waxkasta aan gacanta ku hayo, waad aqbali doontaa oo aad aniga la mid tahay.
Maxaan sameyn karnaa Waxaan dhawaan lumay furayaashii gaariga. Waxaan ka dhex fiiriyey jeebbooyinkayga, qolalka gurigeenna oo dhan, masawirrada, dabaqa, gees kasta. Nasiib darrose, waa inaan si ceeb ah u idhaahdo waxaan ku eedeeyey xaaskayga iyo carruurteyda maqnaanshaha. Ka dib oo dhan, wax walba si hagaagsan ayey iigu shaqeeyaan, wax kasta ayaan gacanta ku hayaa waxna ma lumiyo! Ugu dambeyntiina, waxaan kaheley furaheyga - gaarigeyga gaarigeyga dabka. Si kasta oo ay ahaataba si caqli gal ah oo dheer oo aan baari karo, waligey ma helin furayaasha baabuurkeyga gurigeyga ama hoyga xubnaha qoyskeyga sababtoo ah ma aysan aheyn kuwa halkaas joogay. Haddii aan raadineyno sababaha dhibaatooyinkayaga aan ula jirno kuwa kale, si dhif ah ayaan ku heli doonnaa. Sababtoo ah looma heli karo halkaas. Caadi ahaan way fududahay oo iska dhex socdaan annaga, nacasnimada bini-aadamka ayaa edbiya isaga, oo qalbigiisuna Rabbiga wuu ka xanaaqay (Maahmaahyadii 19: 3). Oggolow haddii aad khalad samayso oo masuuliyadda iska saar! Tan ugu muhiimsan, iskuday inaad joojiso inuu noqdo qofka ugufiican ee aad u maleyneyso inaad tahay. Jooji rumaynta in lagaa aqbali doono oo lagu jeclaan doono haddii aad tahay qofkaas qumman. Dhacdada dembiga, waxaan luminay aqoonsigeenna run, laakiin markii Ciise ku dhintay iskutallaabta dusheeda, beenta jacaylka shuruuduhu weligeed way dhimatay. Ha rumeynin beentaan, laakiin rumeyso in Ilaah kugu faraxsan yahay, uu ku aqbalayo oo uu kuu jecel yahay shuruud la'aan - iyadoo aan loo eegin dareenkaaga, daciifnimadaada iyo xitaa nacasnimadaada. Ku dhegan xaqiiqda aasaasiga ah. Khasab kuguma aha inaad naftaada ama dadka kale caddeyso. Ha eedeyn kuwa kale. Ha noqon basil.